ကလေးမှာ တုပ်ကွေးမိနေပြီဆိုရင် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
● ကလေးကို သက်သောင့်သက်သာရှိအောင် ထားပါ။ အရည်များများတိုက်ပြီး အာဟာရရှိတာလေးတွေကို နည်းနည်းချင်းစီ ကျွေးပါ။
● ဖျားနေရင် အဝတ်အစား ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝတ်ပေးပါ။ အခန်းအပူချိန်ကို ၂၀°C ဝန်းကျင်မှာ ထားပေးပါ။
● နာတာ ကိုက်တာ ခဲတာ၊ ၃၈.၅°C ထက် ဖျားတာတွေ သက်သာစေဖို့ ပါရာစီတမော တိုက်ပါ။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း (သို့) ဆေးဘူးခွံမှာပါတဲ့ အညွှန်းအတိုင်း တိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အက်စ်ပရင်ပါတဲ့ဆေးတွေ ပေးမိရင် ဦးနှောက်နဲ့အသည်းကို ထိခိုက်နိုင်လို့ သတိထားပါ။
● ဆရာဝန် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေ တိုက်ပါ။
● တခြားဆေးတွေ သောက်နေရတဲ့ကလေးတွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါရှိတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဆေးမတိုက်ခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ညွှန်ကြားတာထက် ပိုမတိုက်ပါနဲ့။
● ရေနွေးလေးနဲ့ ပလုတ်ကျင်းပေးတာက လည်ချောင်းနာတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
>> တုပ်ကွေးမပြန့်ရအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ?
● ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ ရပါတယ်။ အသက် ၆ လ ကျော်တဲ့ကလေးတွေဟာ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး ထိုးနိုင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးထိုးတဲ့နှစ်မှာ ၂ ကြိမ် ထိုးပေးဖို့ လိုပါတယ်။
● အိမ်မှာ အသက် ၅ နှစ်အောက်ကလေးတွေနဲ့ နာတာရှည်ရောဂါရှိသူ ကလေးတွေရှိနေရင် တစ်အိမ်လုံးလည်း ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်ပါတယ်။
● အရေးကြီးဆုံးက လက်ဆေးဖို့ပါ။
* ချောင်းဆိုးပြီး၊ နှာချေပြီး၊ နှာခေါင်းညှစ်ပြီး လက်သေချာဆေးပါ။
* အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေသူတစ်ဦးဦးနဲ့ ထိတွေ့မိပြီးရင်လည်း လက် သေချာဆေးပါ။
* ကလေးနှာခေါင်းကို ညှစ်ပေးပြီးရင်လည်း လက် သေချာဆေးပါ။
* ရေနဲ့ဆပ်ပြာ မရှိရင်လညိး အရက်ပြန်ပါတဲ့ လက်ဆေးရည်နဲ့ ဆေးပေးလို့ရပါတယ်။ ဆေးရည်ကို ကလေးတွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
● အသက် ၃ လအောက်ကလေးတွေကို ဖျားနေသူတွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာထားပါ။
● ကလေး နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးရင် တစ်ရှူးနဲ့ အုပ်တတ်အောင် သင်ကြားပေးထားပါ။
● ပါးစပ်ထဲ ထည့်ဆော့လို့ရတဲ့ အရုပ်တွေကို မဆေးကြောရသေးဘဲ တခြားကလေးကို ပေးမဆော့ပါနဲ့။
● မဆေးရသေးတဲ့ စားပြီးသား ပန်းကန်ခွက်ယောက်တွေကို မျှမစားပါနဲ့။
● ဖျားနေရင် ဆေးခန်းပြချိန်ကလွဲလို့ အိမ်မှာပဲ နေပါ။
● ကေလးကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိေအာင္ ထားပါ။ အရည္မ်ားမ်ားတိုက္ၿပီး အာဟာရရွိတာေလးေတြကို နည္းနည္းခ်င္းစီ ေကြၽးပါ။
● ဖ်ားေနရင္ အဝတ္အစား ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ဝတ္ေပးပါ။ အခန္းအပူခ်ိန္ကို ၂၀°C ဝန္းက်င္မွာ ထားေပးပါ။
● နာတာ ကိုက္တာ ခဲတာ၊ ၃၈.၅°C ထက္ ဖ်ားတာေတြ သက္သာေစဖို႔ ပါရာစီတေမာ တိုက္ပါ။ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း (သို႔) ေဆးဘူးခြံမွာပါတဲ့ အၫႊန္းအတိုင္း တိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို အက္စ္ပရင္ပါတဲ့ေဆးေတြ ေပးမိရင္ ဦးေႏွာက္နဲ႔အသည္းကို ထိခိုက္ႏိုင္လို႔ သတိထားပါ။
● ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားတဲ့အတိုင္း ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုးေပ်ာက္ေဆးေတြ တိုက္ပါ။
● တျခားေဆးေတြ ေသာက္ေနရတဲ့ကေလးေတြ၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိတဲ့ ကေလးေတြမွာ ေဆးမတိုက္ခင္ ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၫႊန္ၾကားတာထက္ ပိုမတိုက္ပါနဲ႔။
● ေရေႏြးေလးနဲ႔ ပလုတ္က်င္းေပးတာက လည္ေခ်ာင္းနာတာကို သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။
>> တုပ္ေကြးမျပန႔္ရေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ?
● ကာကြယ္ေဆးထိုးလို႔ ရပါတယ္။ အသက္ ၆ လ ေက်ာ္တဲ့ကေလးေတြဟာ တစ္ႏွစ္မွာတစ္ခါ တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆး ထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဆုံးထိုးတဲ့ႏွစ္မွာ ၂ ႀကိမ္ ထိုးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။
● အိမ္မွာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြနဲ႔ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူ ကေလးေတြရွိေနရင္ တစ္အိမ္လုံးလည္း ကာကြယ္ေဆး ထိုးသင့္ပါတယ္။
● အေရးႀကီးဆုံးက လက္ေဆးဖို႔ပါ။
* ေခ်ာင္းဆိုးၿပီး၊ ႏွာေခ်ၿပီး၊ ႏွာေခါင္းညႇစ္ၿပီး လက္ေသခ်ာေဆးပါ။
* အသက္ရႉလမ္းေၾကာင္းပိုးဝင္ေနသူတစ္ဦးဦးနဲ႔ ထိေတြ႕မိၿပီးရင္လည္း လက္ ေသခ်ာေဆးပါ။
* ကေလးႏွာေခါင္းကို ညႇစ္ေပးၿပီးရင္လည္း လက္ ေသခ်ာေဆးပါ။
* ေရနဲ႔ဆပ္ျပာ မရွိရင္လညိး အရက္ျပန္ပါတဲ့ လက္ေဆးရည္နဲ႔ ေဆးေပးလို႔ရပါတယ္။ ေဆးရည္ကို ကေလးေတြနဲ႔ ေဝးရာမွာထားဖို႔ေတာ့ အေရးႀကီးပါတယ္။
● အသက္ ၃ လေအာက္ကေလးေတြကို ဖ်ားေနသူေတြနဲ႔ ေဝးေဝးမွာထားပါ။
● ကေလး ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ တစ္ရႉးနဲ႔ အုပ္တတ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးထားပါ။
● ပါးစပ္ထဲ ထည့္ေဆာ့လို႔ရတဲ့ အ႐ုပ္ေတြကို မေဆးေၾကာရေသးဘဲ တျခားကေလးကို ေပးမေဆာ့ပါနဲ႔။
● မေဆးရေသးတဲ့ စားၿပီးသား ပန္းကန္ခြက္ေယာက္ေတြကို မွ်မစားပါနဲ႔။
● ဖ်ားေနရင္ ေဆးခန္းျပခ်ိန္ကလြဲလို႔ အိမ္မွာပဲ ေနပါ။
၁၄.၇.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတစ်ယောက် စပြီးပြုံးတတ်တဲ့အချိန်က မိဘတွေအတွက် မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေမယ့် ကြည်နူးစရာအချိန်တစ်ခုပါ။ ဒီတော့ ကလေးတွေ ဘယ်အရွယ်မှာ စပြီးပြုံးတတ်ကြသလဲ။ ဒီလိုအပြုံးတွေက သူတို့ရဲ့လူမှုဘဝနဲ့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တွေရှိလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
၁၃.၇.၂ဝ၂ဝ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ညဘက်မှာ ကလေး နို့ထတိုက်ရလို့ အိပ်ရေး အရမ်းပျက်တဲ့ မေမေတွေအနေနဲ့ ကလေးလေး တစ်ညလုံး အိပ်စေဖို့ကို စိတ်ကူးယဉ် မျှော်လင့်ကြမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ dream feed အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ Dream feed ဆိုတာက ကလေးအိပ်နေရင်းသား နို့တိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ညဘက် ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီလောက်မှာ တိုက်ထားပြီးတော့ မနက်အထိ ကလေး ဗိ...